यसअघि राम्रो छ बर्षको सुरुवाती रिपोर्ट, ‘हाउ फन्नी’ले के कायम राख्ला ? « Mazzako Online
यसअघि राम्रो छ बर्षको सुरुवाती रिपोर्ट, ‘हाउ फन्नी’ले के कायम राख्ला ?
नयाँ बर्षको पहिलो साता कुनै पनि नेपाली फिल्मका निर्माता आफ्नो प्रोडक्ट रिलिज गर्न तयार हुँदैनन् । चैत्रको अन्तिम साता चलेका फिल्मले नै बजारमा चर्चा पाउने भएकाले यसो गरिएको हुनसक्छ । तर, दोश्रो हप्ताबाट भने नेपाली फिल्म निरन्तर चल्छन् ।
नेपाली फिल्मको नयाँ बर्षको पहिलो महिनाको पहिलो रिलिज हेर्ने हो भने सुखद छ । २ बर्ष अगाडि ‘नोभेम्बर रेन र कबड्डी’ रिलिज हुँदा दुबैले कमाए । दुबै फिल्मका निर्माता दर्शक हलमा देखेर दंग थिए । गतबर्ष पनि रिलिज भएको फिल्म ‘रेशम फिलिली’को व्यापार बबाल थियो । पहिलो दिनमै फिल्मले ७१ लख ग्रस कलेक्शन गरेको थियो । दोश्रो दिन भूकम्प नगएको भए यसले निर्माताको बोरा भथ्र्यो ।
यो बर्ष फिल्म ‘हाउ फन्नी’ले बर्षको सुरुवात गर्दैछ । निलु डोमाको निर्देशनमा बनेको यो फिल्ममा प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी, निशा अधिकारी, दयाहाङ राई, अनुप विक्रम शाही मुख्य भूमिकामा छन् । केकी र प्रियंका जाशुशको भूमिकामा फिल्ममा देखिएका छन् ।
बर्षको बोहनी यो फिल्मले के सुखद गर्ला, चर्चा सुरु भएको छ । बोहनी राम्रो भयो भने बर्ष नै राम्रो हुन्छ भनिन्छ । चर्चित कलाकारहरु रहेको यो फिल्मलाई बोहनीको चुनौती पनि छ ।